Kormeeraha guud | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ku soo dhowow Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka!
Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u qabto degmadeena dugsi - mid ka mid ah kuwa ugu fiican Minnesota iyo qarankaba. Aad ayaan ugu faraxsanahay shaqada aan halkaan ka qabanno, waxaana u maleyneynaa in shaqadeena waxbarista carruurta ay tahay mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan adduunka. Minnetonka, waxaan diiradda saareynaa heer caalami, heer sare oo ilmo-ku-saleysan.
Minnetonka waa degmo hal abuur leh oo ka dhexjirta bulshada deggan. Waad ku mahadsan tahay taageerada weyn ee bulshada iyo maaraynta maaliyadeed ee aadka u fiican, maanaan la kulmin miisaaniyadaha degmo tan iyo 2005 - annaguna waxaan nahay degmadda kaliya ee ku taal aagga mitrooga ee sheegan kara. Iyada oo 72% codbixiyeyaasha aan taageerno aftida aan qaadnay 2015, odoroska miisaaniyadeena waa mid xoogan mustaqbalka soo socda.
Iyada oo 72% codbixiyeyaasha aan taageerno aftida aan qaadnay 2015, odoroska miisaaniyadeena waa mid xoogan mustaqbalka soo socda.
Taasi waxay ka dhigan tahay inaan xoogga saari karno carruurta iyo waxbarashada.
Waxaad sidoo kale xasilooni ka heli doontaa jaaliyadaha iskuulka. Maaddaama aan nahay bulsho si buuxda u horumarsan, ma rajeyneyno wax isbeddel ah oo ku yimaada xuduudaha dugsiga ama degmada. Hawlgallo deggan oo si fiican loo maareeyay, waxaan awoodnaa inaan xoogga saarno waxbarashada cusub ee carruurta.
Waxaan soo jiidaneynaa oo haynaa macalimiinta iyo shaqaalaha kuwa ugu fiican shaqadooda. Waxaan nahay hogaamiye qaran oo adeegsanaya tikniyoolajiyad ahaan dardar galinta waxbarashada. Wadajir ahaan, macallimiinta macallimiinta ah iyo aaladaha hal-abuurka leh waxay siiyaan waxbarasho shakhsiyeed ilmo kasta.
Waxaan leenahay dareen degdeg ah si aan ula kulanno baahiyaha ardayda maanta isbeddelaysa. Waan ognahay inaan ardayda u diyaarinayno mustaqbal aan qiyaasi karno oo keliya. Waxaan u heellan nahay inaan dib-u-qeexno heer sare ee waxbarashada iyadoo loo eegayo ereyadayada isla markaana si weyn kor ugu qaadno fursadaha waxbarasho ee carruurta.
Fadlan soo gal oo soo booqo dugsiyadeenna, si caadi ah iyo shaqsi ahaanba. Tacliintu waa khibrad shaqsiyeed. Waxaad kuheli kartaa kaliya faham dhab ah sida aan u daneyno ilmo walba waxbarashadiisa adoo u kuur galaya shaqaalaheena iyo ardaydeena gacanta koowaad. Maamulayaasheenu way ku farxi doonaan inay jadwal booqasho idiin qabtaan.
Marka loo eego cabir kasta oo heer sare ah oo xagga waxbarashada ah, Dugsiga Degmada Minnetonka wuu ku fiicanyahay. Haddii aad raadineyso bulsho u heellan qoysaska iyo carruurta, mid qiimeysa oo taageerta waxbarashada, isla markaana leh beel ka soo jeeda beel ahaan, waxaad ka heshay Dugsiga Degmada Minnetonka!
Dr. Dennis Peterson, Kormeeraha guud